48.0375°N 4.6647°W ﻿ / 48.0375; -4.6647 I Plogoff dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29168. I Maurice Lemaître no benny tanàna ...
48.0786°N 4.1931°W ﻿ / 48.0786; -4.1931 I Plogonnec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29169. I Christian Kéribin no benny tanà ...
47.9364°N 4.1517°W ﻿ / 47.9364; -4.1517 I Plomelin dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29170. I Franck Pichon no benny tanàna ma ...
47.8411°N 4.2833°W ﻿ / 47.8411; -4.2833 I Plomeur dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29171. I Léa Laurent no benny tanàna mandr ...
48.1819°N 4.2306°W ﻿ / 48.1819; -4.2306 I Plomodiern dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29172. I Claude Bellin no benny tanà ...
48.0175°N 4.2092°W ﻿ / 48.0175; -4.2092 I Plonéis dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29173. I Pierre Le Berre no benny tanàna m ...
47.9036°N 4.2825°W ﻿ / 47.9036; -4.2825 I Plonéour-Lanvern dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29174. I Michel Canevet no benny ...
48.2542°N 3.8239°W ﻿ / 48.2542; -3.8239 I Plonévez-du-Faou dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29175. I Guy Rannou no benny t ...
48.1264°N 4.2186°W ﻿ / 48.1264; -4.2186 I Plonévez-Porzay dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29176. I Paul Divanach no benny ...
48.4347°N 4.7294°W ﻿ / 48.4347; -4.7294 I Plouarzel dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29177. I André Talarmin no benny tanàna ma ...
48.5411°N 4.6561°W ﻿ / 48.5411; -4.6561 I Ploudalmézeau dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29178. I Marguerite Lamour no benny ta ...
48.5375°N 4.3103°W ﻿ / 48.5375; -4.3103 I Ploudaniel dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29179. I Joel Marchadour no benny tanàna ...
48.4544°N 4.1414°W ﻿ / 48.4544; -4.1414 I Ploudiry dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29180. I Jean-Jacques Piton no benny tanàna ...
48.6578°N 4.1733°W ﻿ / 48.6578; -4.1733 I Plouescat dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29185. I Jean le Duff no benny tanàna ma ...
48.6408°N 3.8208°W ﻿ / 48.6408; -3.8208 I Plouezoch dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29186. I Yves Moisan no benny tanàna man ...
48.5639°N 4.1400°W ﻿ / 48.5639; -4.1400 I Plougar dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29187. I Marie-Françoise Mingam no benny t ...
48.6964°N 3.7881°W ﻿ / 48.6964; -3.7881 I Plougasnou dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29188. I Yvon Tanguy no benny ...
48.3733°N 4.3694°W ﻿ / 48.3733; -4.3694 I Plougastel-Daoulas dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29189. I Dominique Cap no benny t ...
48.3436°N 4.7103°W ﻿ / 48.3436; -4.7103 I Plougonvelin dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29190. I Israel Bacor no benny tanàna m ...
48.5217°N 3.7117°W ﻿ / 48.5217; -3.7117 I Plougonven dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29191. I Andre Prigent no benny tanàna ...
48.6653°N 4.0436°W ﻿ / 48.6653; -4.0436 I Plougoulm dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29192. I Jean Berrou no benny tanàna man ...
48.5556°N 4.0844°W ﻿ / 48.5556; -4.0844 I Plougourvest dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29193. I Jean Jézéquel no benny tanàn ...
48.6078°N 4.5042°W ﻿ / 48.6078; -4.5042 I Plouguerneau dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29195. I André Lesven no benny tanàna m ...
48.5253°N 4.6000°W ﻿ / 48.5253; -4.6000 I Plouguin dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29196. I Michel Troadec no benny tanàna man ...
48.01430000°N 4.48630000°W ﻿ / 48.01430000; -4.48630000 I Plouhinec, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29197. I Jean ...
48.6089°N 4.2967°W ﻿ / 48.6089; -4.2967 I Plouider dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29198. I Jérôme Ronvel no benny tanàna mand ...
48.5683°N 3.7000°W ﻿ / 48.5683; -3.7000 I Plouigneau dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29199. I Joseph Urien no benny tanàna m ...
48.4033°N 4.7219°W ﻿ / 48.4033; -4.7219 I Ploumoguer dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29201. I Jean-Hervé LHostis no benny tanà ...
48.4400°N 3.8897°W ﻿ / 48.4400; -3.8897 I Plounéour-Ménez dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29202. I Ernest Géréec no benny ta ...
48.6517°N 4.3169°W ﻿ / 48.6517; -4.3169 I Plounéour-Trez dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29203. I Pascal Goulaouic no benny ta ...
48.5158°N 4.2108°W ﻿ / 48.5158; -4.2108 I Plounéventer dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29204. I Pierre Héraud no benny tanàn ...
48.6175°N 4.2108°W ﻿ / 48.6175; -4.2108 I Plounévez-Lochrist dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29206. I Gildas Bernard no benn ...
48.2947°N 3.5925°W ﻿ / 48.2947; -3.5925 I Plounévézel dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29205. I Xavier Berthou no benny ta ...
48.5103°N 4.6842°W ﻿ / 48.5103; -4.6842 I Plourin dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29208. I Antoine Corolleur no benny tanàna m ...
48.5353°N 3.7894°W ﻿ / 48.5353; -3.7894 I Plourin-lès-Morlaix dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29207. I Jacques Brigant no be ...
48.5303°N 4.4517°W ﻿ / 48.5303; -4.4517 I Plouvien dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29209. I Christian Calvez no benny tanàna m ...
48.5806°N 4.0364°W ﻿ / 48.5806; -4.0364 I Plouvorn dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29210. I Jean-Claude Marc no benny tanàna ...
48.3161°N 3.7364°W ﻿ / 48.3161; -3.7364 I Plouyé dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29211. I Marcel Le Guern no benny tanàna ...
48.3831°N 4.6189°W ﻿ / 48.3831; -4.6189 I Plouzané dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29212. I Bernard Rioual no benny tanàna man ...
48.5969°N 4.1114°W ﻿ / 48.5969; -4.1114 I Plouzévédé dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29213. I Viviane Pluchon no benny tanàn ...
48.4858°N 4.2442°W ﻿ / 48.4858; -4.2442 I Plouédern dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29181. I Jacques Refloch no benny tanàna m ...
48.6217°N 3.6742°W ﻿ / 48.6217; -3.6742 I Plouégat-Guérand dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29182. I Christian Le Manach no b ...
48.5725°N 3.6092°W ﻿ / 48.5725; -3.6092 I Plouégat-Moysan dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29183. I François Girotto no benny ...
48.6289°N 3.9881°W ﻿ / 48.6289; -3.9881 I Plouénan dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29184. I Aline Chevaucher no benny tanàna ...
47.9167°N 4.3614°W ﻿ / 47.9167; -4.3614 I Plovan dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29214. I Michel Burel no benny tanàna mandr ...
47.9875°N 4.4239°W ﻿ / 47.9875; -4.4239 I Plozévet dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29215. I Pierre Plouzennec no benny tanàn ...
48.1581°N 4.2325°W ﻿ / 48.1581; -4.2325 I Ploéven dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29166. I Didier Planté no benny tanàna ...
47.9817°N 4.1775°W ﻿ / 47.9817; -4.1775 I Pluguffan dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29216. I Dominique Closier no benny tanà ...
47.8564°N 3.7458°W ﻿ / 47.8564; -3.7458 I Pont-Aven dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29217. I Isabelle Biseau no benny tanàna ...
48.043°N 4.488°W ﻿ / 48.043; -4.488 I Pont-Croix dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29218. I Henri Moan no benny tanàna mandrit ...